India: Tsy Fitafin’ny Mpampihorohoro Ny Sari · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Marsa 2018 17:08 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, বাংলা, македонски, Ελληνικά, English
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny desambra 2010)
Ambasadaoro Meera Shankar avy ao amin'ny Repoblikan'i India mampiseho ny taratasy fanendrena azy amin'ny filoha Amerikana Barack Obama. Sary avy amin'i Lawrence Jackson, tao amin'ny Departemantam-panjakana Amerikana. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Nesorina teo amin'ny tsipi-piarovana ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Jackson-Evers tany Mississippi, Etazonia ny ambasadaoro Indiana any Etazonia Meera Shankar, ary noteren'ny Fitantanam-Piarovana Ara-pitaterana (Transport Security Administration) (TSA) hanaovana fisavana ny vatany. Ny 4 Desambra 2010, saika hiditra ny zotram-piaramanidina mankany Baltimore i Shankar rehefa avy nanatrika fandarahan'asa tao amin'ny Oniversitem-panjakana ao Missisippi ary na dia niditra tsy nisy olana teo amin'ny fidirana mpamantatra vy (maneno raha misy vy) tao amin'ny seranam-piaramanidina aza izy, dia nesorina teo noho izy mitafy sari, akanjom-pirenen'ny vehivavy ao India. Nanonona ny satany ara-diplaomatika izy, saingy tsy nanakana azy ireo teo anoloan'ireo mpandeha hafa izany. Tamin'ny volana Septambra lasa teo, mbola niatrika tranga tahaka izany ihany tany Chicago i Shankar .
Niteraka hetsi-panoherana maventy avy any India ny zava-nitranga. Nilaza i Nirupama Rao, sekreteram-panjakana misahana ny raharaham-bahiny Indiana fa tsy diplaomasiam-panjakana mendrika izany nasehon'i Etazonia izany ary nanamafy ny minisitry ny raharaham-bahiny Indiana S.M. Krishna fa tsy azo ekena ho an'i India izany. Nanao fihetsiketsehana teo akaikin'ny Masoivohon'i Etazonia any India ny antoko mpanohitra Indiana BJP ary mangataka fialan-tsiny avy amin'i Etazonia. Feno fanehoan-kevitra ihany koa ny tontolon'ny bilaogy rehefa nivoaka ny vaovao.
Isan-karazany ny valinteny avy amin'ireo manampahefana Amerikana. Niresaka tamin'ilay ambasadaoro ny Departemantam-panjakana, maneho ny alahelony noho ny zava-nitranga. Na dia izany aza, araka ny loharanom-baovao, niaro ny hetsika nataony ny TSA, nilaza fa tsy afa-miala amin'ny fisavàna ireo diplaomaty ary “natao fikarohana araka ny politika sy ny fepetram-piarovan'ny TSA” i Shankar. Azo lazaina eto fa tsy ny mpandeha rehetra no atao fisavàna, fa ireo mpandeha izay mandalo eo amin'ny fidirana ka andrenesana vy maneno ihany no tsy maintsy atao fisavana. “Nandalo ny fidirana tsy nisy vy naneno anefa Ramatoa Shankar”. Milaza ny fitsipi-pisavàn'ny polisin'ny sisintany Amerikana fa tsy maintsy manana ahiahy mandresy lahatra na fampahafantarana mialoha ny manampahefana fa mampiseho fandrahonana na fampidirana zavatra an-tsokosoko ny anton'ny fisavàna, ary tokony hanana didy avy amin'ny manampahefana ambony na ny fitsarana vao manao fisavàna lalindalina kokoa.
Azo antoka fa nahatsiaro ho afa-baraka ity ambasadaoro ity satria natao fisavàna imasom-bahoaka, tao anaty efitrano mangarahara. Pavani ao amin'ny Sepia Mutiny nanoratra hoe:
The airport involved did not have the new body scanners available so that option was out for the ambassador. But a clear box hardly sounds private enough for anyone uncomfortable enough to request a private search. And if simply wearing a sari is going to trigger a serious full-body pat-down, then an actual private option should be offered, as it should be to anyone requesting a private search.
Mbola tsy manana scanner vaovao natokana ijerena vatana ity seranam-piaramanidina voalaza ity ka tsy azo natao ho an'ilay ambasadaoro izany. Saingy tsy sahaza ho an'ny olona atao fisavàna manokana ara-batana ny efitra mangarahara. Ary raha miteraka fisavàna ara-batana ny fanaovana sari, dia tokony hisy toerana manokana ampahafantarina ho an'ireo izay mangataka ny hanaovana ny fisavàna amin'izany faritra amin'ny vatana takonana izany.
Vivek naneho hevitra mikasika ny lahatsoratra etsy ambony:
One item that didn't make it into any of the news stories was that a TSA official, Anna Dushas, tried removing Shankar's sari before her supervisor, Kris (we only know her first name), intervened.
Zavatra iray tsy nivoaka tamin'ny fampahalalam-baovao fa nisy manampahefanan'ny TSA iray antsoina hoe Anna Dushas nikasa hanala ny sari an'i Shankar alohan'ny nidiran'ny lehibeny, Kris (ny fanampin'anarany ihany no fantatra) an-tsehatra.
Ity tranga ity no mampiseho ny tsy fahafantarana Sari, fitafiana nasionaly ao amin'ny firenena Aziatika maro izay anaovan'ireo vehivavy an-tapitrisany eto amin'ity faritra ity sy manerana izao tontolo izao. Fanehoan-kevitra ao amin'ny NYDailyNews.com maneho ny fahatsapan'ny Amerikana momba ny Sari:
Manaova fanamian'ny mpampihorohoro ary tsy maintsy atao fisavàna ianao. Nanao asa tsara ny TSA.
Araraoty ny fofon'ny mpampihorohoro ary tokony hanantena ny hikaroka ianao. Asa tsara TSA.
Bhai manontany tena hoe:
What the reaction of the Americans would be should any of their officials (senators, ambassadors…) are subjected to a similar search in India?
Inona no mety ho fihetsiky ny Amerikanina raha toa ka iharan'ny fisavàna tahaka izany ao India ny manampahefanan-dry zareo (senatera, ambasadera …)?
Rajeev ao amin'ny Random Thoughts naneho hevitra hoe:
Rather than whine about it, we in India, need to take lessons from their security procedures and subject everyone to stringent security checks in our environment too. In matters of our country's security we should not be bothered about others’ opinions!!
Raha tokony alahelo ny amin'izany, isika any India, dia mila mandray lesona avy amin'ny fomba fiasan'izy ireo ara-pandriampahalemana ary mampanao fisavàna henjana ho an'ny tsirairay ao amin'ny tontolontsika ihany koa. Mikasika ny fiarovam-pirenentsika, tsy tokony ho voelingelina amin'ny hevitry ny hafa isika!!